अहिलेसम्म 99% फेल ल भन्नुहोस कुन अक्षर छुटेको छ यहाँ भित्र गएर पढेर कमेन्ट गर्नुहोस
मनोरञ्जन । आज हामिले हल्का रमाईलो पोस्ट लिएर आएका छौ । तर त्यो पोस्ट अर्थात फोटो मा रहेको छ । क ख ग देखि ज्ञ सम्म तर भित्र भने दुई अक्षर छुटेको छ । तपाईं हरु त्यो कुन अक्षर छुटेको छ । हामिले त्यो फोटो यहि पोस्ट को तल लास्ट मा राखेका छौ । तँपाईहरु ले हेरेर राम्रो शीत पढेर मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला । धेरै ले अहिलेसम्म.....
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बालसखा बताउने चन्द्रप्रसाद नेपाल यतिबेला बेसाहरा छन । बुढेसकालमा कसैको साहरा नपाएपछि उनी सडकमा ओर्लन बाध्य भएका हुन । १२ वर्षअघि श्रीमती गुमाएसँगै आफ्नो थातथलोमा अडिन पाएनन । ‘खान र बस्नको ठेगान नभएको म १२ वर्षदेखि सडक र पेटीमै भौतारिरहेको छु,’ निरास सुनिए.....
बिजयेन्द्रले श्वेतालाई साइकल सिकाउँदै: आज झण्डै लडिन श्वेता खडका (भिडियो सहित)
काठमाडौ । पछिल्लो समय अझ बढी चर्चा कमाएकी नायीका श्वेता खड्का अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल नै भइरहेकी छिन । धनगढीका अर्वपती ब्यबसायीका छोरा विजयेन्द्र सिंह राउतसँग धुमधामले विबाह गरेसँगै अहिले उनी समाचार र युट्युवमा ट्रेण्डिग लिस्टमा परिरहेकी छिन । विबाहपछि श्वेता अहिले पारिवारिक भेटघाट र मन्दिर.....
कस्तो अचम्म !!! मात्र पचास पैसामा एक थाल खाना !
मनोरंजन । पसलेले धेरैजना ग्राहकलाई समान वेचिसक्दापनी रोहन टुलुटुलु हेरेर मात्र उभिइ रहेको देखेपछी… पसले: ‘तिमी केहि माग्दैनौ, उभिएर के हेरेको ?’ रोहन: ‘दाउ हेरेको !’ प्रेमिका: (फोन गरेर) ‘सुन न प्रिय, भोलि तिमीलाई भेट्न आउन नभ्याउने भएँ !’ प्रेमी: ‘तर, किन प्रिया ?’ प्रेमिका: ‘मलाई अर्को एउटा काममा जानु.....
काठमाडौँ । नायिका श्वेता खड्काले मंसिर २२ गतेको लगनमा धुमधामले बिबाह गरेकी छिन् । प्रेमी विजयन्द्रसिंह रावतसँग गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा श्वेताले विवाह गरेकी श्वेताले अहिले आफ्नो विबाहपछि जीवन सुरु गरेकी छिन् । सिमित साथीभाई र आफन्त माझ धुमधामले विबाह गरेकी श्वेताले विबाह गरेर घरमा पुगेपछि विजयेन्द्रको.....
कान्छा ड्राइभर र कल्पना सँगको दोहोरी हाने कडा टुक्का भिडियो सहित
काठमाडौ । अहिले यतिबेला सामाजिक संजाल मा निकै नै चर्चामा आएकी छिन गायिका कल्पना दाहाल । उनी एक गायिका हुन कल्पना दाहाल तर उनी एहिले एकाएक सामाजिक संजाल मा भाईरल भएकी छिन । उनले र चर्चित ब्याक्ती रमेश प्रसाईं सित उनले गाएकी छिन दम्दार दोहोरी यहि बेला मा उनी सामाजिक संजाल मा भाईरल भएकी हुन् । हामिले अहिले.....
रमेश र कल्पनाको बिहेकै बिचमा चल्यो घम्साघम्सी दोहोरी भाग- २ (भिडियो सहित)
काठमाडौं । आफ्ना तार्किक अभिव्यक्तिका कारण सामाजिक सञ्जालहरुमा सँधै चर्चामा रहने रमेश प्रसाई अहिले फरक परिचयका साथ युट्युबमा छाएका छन । पूर्वी नेपालमा एक रेडियो पत्रकारका रुपमा स्थापित भएका दुबै आँखा देख्न नसक्ने युवक रमेश वक्तृत्व क्षमताका कारण नेपालभर परिचित छन । उनी ‘मोटिभेशनल ट्रेनर’ का रुपमा.....
सुरु भयो वालुवाटारमा वाम फलाँस: देउवासँग साईड सिन, प्रचण्डलाई हाप्न दबाब !
मनोरञ्जन । प्रदेश सरकारले चलाउन सकेन तरकारी बजार, सहकारीलाई जिम्मा दिने तयारी तरकारी बजार मात्र हैन, प्रदेश सरकार आफैंलाई चलाउन ठेकेदार चाहिने स्थिती आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ ‘वर्षको उत्कृष्ट कर कार्यालय’ बिरगन्ज, भैरहवा राजस्व कार्यालयले बागलुङ्बाट सिक्नुपर्ने ! यस्तो छ भारतीय विदेश सचिवको.....
यतिबेला सुत्नु अघि नातिनीको गीत सुन्न छुटाउँदैनन प्रचण्ड, सोध्छन कति भयो भ्यू र शेयर ?
काठमाडौं । परिवारका सबैजसो सदस्य राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील भइरहेका बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की नातिनी स्मिता दाहाल संगीत क्षेत्रमा लागिरहेकी छन । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डकी नातिनी स्मिताले छोटो समयमै संगीत उद्योगमा निकै फड्को मारेकी छन् । स्मिताको लोभलाग्दो क्रेज.....
खुसिको खबर: रमेश र कल्पनाको विवाह बारे पहिलो पटक मुख खोले… भिडियो सहित
काठमाडौं । केही हप्ता अगाडि इन्द्रेणी कार्यक्रममा दोहोरी गाएर रातरात चर्चामा आएका जोडी प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईं र गायिका कल्पना दाहालको ताजा अन्तर्वाता एक्सेेन नेपाल टिभीमा सार्वजनिक भएको छ । रमेश प्रसाईंलाई सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बनाउन उल्लेखनीय भुमिका निभाएका प्रसाईंका आत्मिय मित्र जीवन बिष्टले.....